Pc Sheet Vagadziri & vanotengesa - China Pc Sheet Fekitori
Polycarbonate Plastiki / Hollow Sheet Zvivakwa Zvekuvakisa
Chigadzirwa Unhu hwekupinda muyero: yakakwira yekupinda mwero, iyo inogona kusvika 25% uye 86% mune akasiyana mavara. Impact kuramba: iko kusimba kwekukanganisa mukoramu isina hove inguva makumi masere pane yegirazi. Simba: Mushure memaawa zviuru zvina zvekumhanyisa bvunzo dzekukwegura, Yi ari 2 uye LT ari 0.6% Nekudaro, mushure memakore gumi ekushandisa, yakakwira yekupinda mitengo uye yakadzika yeyero mazinga anogona kuchengetwa. Kudzivirirwa pamwaranzi yeultraviolet: PC mwenje yezuva inogadziridzwa mumatanho matatu akaumbana ayo ...
Yakakwira Hunhu Polycarbonate Solid PC Bhodhi Risimba Bhodhi
Yakasarudzika Fekitori Yakakwira Yakakwira Mhando Polycarbonate PC Sheet
Yedu Service pre-sale sevhisi: 1. Tsika dhizaini 2. Chigadzirwa kubvunza 3. Ipa masampuli mukati memazuva manomwe. Mushure mekutengesa Sevhisi 1. Pfupi dhirivhari nguva uye kugadzira zvimwe zvakafanana zvigadzirwa uye masisitimu. Pamusoro pezvo, kana zvikakumbirwa, zvinyorwa zveinenge mashanu (5) apfuura, mumwe nemumwe uye zvakaenzana ...